अग्रिम बधाई र शुभकामना ! | चितवन पोष्ट दैनिक
अग्रिम बधाई र शुभकामना !
पत्रकार महासंघको जिल्ला अधिवेशनको गर्मीले चितवनलाई तताएको छ । पत्रकारहरुलाई असिनपसिन बनाइदिएको छ । पत्रकारहरु अहिले नियमित कामसमेत छाडेर भोट माग्न व्यस्त भएका छन् । मानौँ, पत्रकारहरु राजनीतिक दलका व्यस्त कार्यकर्ता हुन् । चुनाव भनिसकेपछि जहाँ पनि त्यस्तै हुँदोरहेछ भन्ने उदाहरण पत्रकार मित्रहरुले यतिबेला प्रमाणित गरिदिएका छन् । माहोल सिर्जना गर्न, भोट माग्न र खुराफात गर्ने चटारोले कतिपय साथीहरु रातको चार घन्टा पनि सुत्न नपाएको अवस्था छ । कोही पद नपाएको झोँकमा आफ्नो चित्तलाई पित्तजत्रो बनाइरहेका छन् । फेसबुकबाट चुनावी प्रचारप्रसार गर्ने, सञ्चारगृहमा पुगेर भोट माग्ने र चियागफ गर्ने माहोल त महिना अघिदेखि नै सुरू भएको हो । अहिलेचाहिँ कसको कति भोट आउला, कुन उम्मेदवारले कति पानी खान्छ, को आकाशमाथि उड्छ र कुनचाहिँ हिलोमा जाकिन्छ भनेर पूर्वानुमान गरिन थालेको छ ।
मेरो हातमा यति भोट छ भनेर मित्रहरु अरुको मत आफ्नो स्वामित्वमा रहेको बताउन चुक्दैनन् । आफ्नै श्रीमान्÷श्रीमतीको त मत बाझिन्छ भने अरुको मनका कुरा कसरी थाहा पाउन सकिन्छ होला ? चुनावअघि नै यो हाम्रो प्यानलको पत्रकार, यो उसको प्यानलको पत्रकार भनेर कित्ताकाट गर्न थालिन्छ । पत्रकार पनि मेरो र उसको त नहुनु पर्ने हो । रङ्गभेद, वर्णभेद र क्षेत्रीयता नछुट्टिनु पर्ने हो, छुट्टिँदोरहेछ । पत्रकारको कुनै जात, धर्म र लिङ्ग पनि नछुट्टिनु पर्ने हो, छुट्टिँदोरहेछ । दलित, जनजाति, आदिवासी र पिछडिएको भनेर दर्जा नछुट्याउनु पर्ने हो, छुट्याइँदोरहेछ । यो, त्यो र हाम्रोभन्दा राम्रोलाई छान्ने संस्कार यही चुनावबाट थालनी भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो कि ? चुनावमा त भोट पाए हुन्छ, सुगन्धको पछाडि दौडने फुर्सद कसलाई छ र ?
पत्रकारलाई क्रियाशील, सक्रिय, त्यागी, अनुभवी, वरिष्ठ जेजस्ता विशेषण झुुन्याए पनि त्यो पत्रकार नै हो । जुन संगठनमा रहे पनि, नरहे पनि मुख्य कुरा त महासंघको योग्य जिल्ला नेतृत्व चयन गर्नु नै हो । जसले पत्रकारिता पेसालाई मर्यादित बनाउँदै पत्रकारहरुका हकहितमा काम गर्न सकोस् भन्ने नै हो । तर, चुनावी माहोल हेर्दा यस्तो पनि लाग्छ– यो अधिवेशन नै अन्तिम हो । यसपछि अर्को दिन नै आउँदैन । पत्रकारहरु निष्पक्ष हुनुपर्छ भनिए पनि कोही पनि निष्पक्ष हुन सक्दोरहेनछ । पत्रकारले राजनीति बुझ्नुपर्छ, तर राजनीति गर्नेचाहिँ नेताहरुले मात्रै हो भन्ने गरिन्छ । यहाँ त पत्रकारहरुलाई राजनीतिले यतिसम्म छुँदोरहेछ कि पत्रकारहरु कुनै नेताभन्दा फरक हुँदा रहेनछन् भन्ने सन्देश यही चुनावले देखाएको छ । अहिले अग्रिम रुपमा बधाई खाने पत्रकारहरु थुप्रै हुनुहुन्छ, जसमध्ये यो स्तम्भकार पनि एक हो । अग्रिम बधाई भनेर व्यङ्ग्य गरिएको हो कि, यथार्थमै बधाई दिइएको हो रामजाने !
केही वरिष्ठहरुले त फेसबुकका भित्ताहरुमा भावी विजेताहरुको नामसमेत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । वशिष्ठ ऋषिहरुका सन्तानहरुलाई चाहिँ साह्रै संकट परिरहेको छ । कोही भन्छन्– ‘पार्टी केन्द्रबाट मिलेर जान निर्देशन आयो ।’ कोही भन्छन्– ‘चुनावमा पनि कोही मिलेर जान्छन् ?’ कोही भन्छन्– ‘हाम्रो होइन, राम्रो छानौँ ।’ यस्तो बेलामा पनि दौडधूप नगरे के उम्मेदवार ? यस्तो बेलामा पनि मस्त निदाउने के प्रत्याशी ? चुनावमा होमिनेहरुलाई न निद्रा, न भोक, न तिर्खा, न शोक हुनुपर्छ । पत्रकारले चुनावमा पनि समाचार लेख्ने हो र ? खुराफात गर्न नजान्ने, नसक्ने के उम्मेदवार ? त्यसैले, पत्रकारहरुले चुनावमा केही काम गर्नैहुन्न । घर बिर्सनुपर्छ, कार्यालय बिर्सनुपर्छ, जीवनसाथी बिर्सनुपर्छ, सबथोक बिर्सनुपर्छ । चुनाव सम्झनुपर्छ, चुनावी माहोल सम्झनुपर्छ र मात्र भोट सम्झनुपर्छ । यस्तो बेलामा भोटरहरुका नाम सम्झनुपर्छ । अझ विशेषगरी मोबाइल नम्बर सम्झनुपर्छ ।
यस्तो बेलामा सबैलाई नमस्ते गर्नुपर्छ । पत्रकार होस् कि गैरपत्रकार, केही मतलब गर्नहुन्न । पत्रकारजस्तो देखेपछि नमस्कार ठोकिहाल्ने र भोट मागिहाल्ने गर्नुपर्छ । चाहे बाबुले छोराछोरीलाई नमस्कार गर्नुपरोस् । काकाहरुले भतिजलाई साष्टाङ्ग दण्डवत् नै किन गर्नु नपरोस् । चुनावमा त पत्रकार पनि नेताजस्तै देखिनुपर्छ । उनीहरुका बोली पनि नेताको जस्तै हनुपर्छ । नसके पनि श्रमजीवी पत्रकारहरुको हितमा आवाज उठाउँछु भनेर रटान दिनुपर्छ । मह¤वाकांक्षी के–के योजना छन्, ती सबै मेरै पालामा पूरा हुनेछन् भनेर गफ चुट्नुपर्छ । उम्मेदवार बन्न पार्टीकै मातहातमा काम गर्नु परे पनि पार्टी पत्रकारिता खारेज गरेर व्यावसायिक पत्रकारिताको विकास गर्छु भन्नुपर्छ । कूटनीति प्रयोग गरेर चुनाव जित्नुपर्छ । अग्रिम बधाई भनेर गरिएको भविष्यवाणीलाई मूर्तरुप दिनुपर्छ ।
माहोल तताउने कुरा, अरुको बुद्धि भुट्ने कुरा, फकाउने कुराका लागि कूटनीति चाहिँदोरहेछ । ‘फुर्सदका कुरा’ लेखेर भोट मिल्ने भए मैले सर्वाधिक भोट ल्याएर केन्द्रीय पार्षद्मा विजयी भइसक्थेँ । तर, यहीँ कुरा गम्भीर छ । पुरानाहरुले टेर्दैनन्, नयाँहरुले फर्केर पनि हेर्दैनन् । लौ, अध्यक्षका लागि भए पनि पत्रकारहरुका आश्रममा पुगेर भोट माग्न हुन्थ्यो । केन्द्रीय पार्षद्का लागि मरिहत्ते गरेर दौडधूप गर्ने कुरा पनि आएन । भोट नमागूँ, फेरि पनि हरूवाकै ‘ट्रेडमार्क’ लाग्ला भन्ने डर । डेढ दशकदेखि पत्रकारिता गरेको म पुरानो पत्रकार भनेर के आफ्नो परिचय आफैँ दिँदै हिँड्ने ? प्रचारप्रसार गर्ने सहयोगीहरुलाई आफ्नै प्रचार गर्न भ्याईनभ्याई छ । फेरि भोट माग्दा पनि ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ । पटकपटक एकै व्यक्तिसँग भोट मागिरहँदा यसले त मेरो कत्ति विश्वास गरेन, यसलाई दिन्नँ भन्न पनि बेर नहुने । नमागूँ भने, त्यसले भोटै मागेन के भोट दिने भन्ने सोचाइ आउला भन्ने पिरलो ।
जो, जससँग भोट मागिन्छ, उसले पनि भन्छ– मलाई पनि एक भोट है ? कति धर्मसंकट पर्ने भने मिलनसार मित्रहरु एउटै पदमा प्रत्याशी भएका हुन्छन् । एउटाको पक्षमा कुरा गर्दा अर्को रिसाउने, अर्कोसँग चियामात्रै खाँदा पनि गठबन्धन गर्न लागेको आरोप झेलिने । आफूलाई भने देशविदेशबाट बधाईको ओइरो आइसक्यो । माहोल भने केही पनि बन्न सकेको होइन । अनुहार हे¥यो, जसले पनि मलाई नै भोट हाल्लाजस्तो लाग्ने । नतिजा हे¥यो, जहिले पनि एक–दुई भोट नपुग्ने । अनि, यस्तो बेलामा चाहिँ साह्रै नमज्जा लाग्ने । तपाईंहरुलाई पनि यस्तो भएको छ ?
यसपालिचाहिँ अग्रिम बधाईले मनमा अलिकति राहत मिलेको छ । चाहे राहतमै चित्त बुझाउनु किन नपरोस् । आहत भएको मनलाई राहत पाए अरु के नै चाहिन्छ र ? अधिवेशनबाट कुशल नेतृत्व चयन होस् र आगामी नेतृत्वले पत्रकारहरुका हकहितमा काम गर्ने सामथ्र्य राखून् । हाम्राभन्दा राम्रा र पूज्यभन्दा योग्य उम्मेदवारहरुलाई विजयी गराऔँ । सफल उम्मेदवारहरुलाई अग्रिम बधाई ! अग्रिमजति मीठो बधाई अरु के हुन सक्छ र ! मलाई पनि अग्रिम बधाई आउने क्रम जारी छ । आप्रवासी मित्रहरुले भोट दिन पाउने भए म अग्रिम रुपमा फेसबुकको भित्तोमा लेख्थेँ होला– ‘मलाई अग्रिम बधाई ।’ हेरौँ मतपरिणाम कस्तो आउँछ– मलाई अग्रिम बधाई तथा शुभकामना दिनेहरुलाई बधाई फिर्ता गर्नुचाहिँ नपरोस् । सबैलाई चेतना भया ।